Ny fitrandrahana crypto sy ny fitrandrahana bitcoin amin'ny rahona - Mitrandraka vola | Vaovao momba ny gadget
Miguel Gaton | | Cryptocurrencies, Software, teknolojia
Raha liana ianao invest in cryptocurrencies ary tsy te handany vola ianao mividy Bitcoins, Ethereum na vola hafa mivantana, avy eo ny safidy mety hahaliana dia ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Ny fitrandrahana cryptocurrency Izy io dia ny fizaram-pahefana itsinjaram-pahefana izay manamarina ny fifanakalozana amin'ny blockchain; Saingy mba hahalalana bebe kokoa amin'ny fomba tsotra izay misy azy, azontsika atao ny milaza fa izany dia dingana iray izay hanokanan'ny solosaina andiana loharanom-pahalalana ary ho valiny dia mandray vola amin'ny vola crypto. Raha te hahita ny fomba fitrandrahana vola madinika amin'ny fomba mahasoa sy amin'ny rahona ianao, dia vakio hatrany ity lahatsoratra ity.
1 Fitrandrahana Cryptocurrency, tantara vitsivitsy
2 Fitrandrahana rahona
3 HashFlare, bitcoins ahy ao anaty rahona
4 Ahoana ny fomba hitrandrahana vola crypto amin'ny Hashflare?
Fitrandrahana Cryptocurrency, tantara vitsivitsy
Taona maro lasa izay dia azo natao izany ahy ny Bitcoins na cryptocurrency hafa amin'ny fomba tsotra avy any an-trano ary mampiasa vola kely vitsivitsy amin'ny sehatry ny fitaovana. Ny solosaina rehetra dia afaka mitrandraka vola madinika amin'ny fomba mahasoa ary noho izany ny olona sasany dia nanapa-kevitra ny hampiasa vola amin'ny masinina hitrandraka avy any an-trano amin'ny fomba tsy dia ilaina loatra. Amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao intsony, ny fisehoan'ny fitaovana natao manokana ho an'ny fitrandrahana ny vola madinika miaraka amin'ny fahasarotan'ny algorithm amin'ny fitrandrahana dia mahatonga azy tsy hahasoa amin'ny fitrandrahana toy izao ankehitriny - farafaharatsiny ho an'ny vola mahazatra indrindra toy ny Bitcoin, Ether, ... - ary ny tsena dia anjakan'ny orinasa lehibe natokan'izy ireo loharano lehibe amin'ity asa ity.
Ary tsy vitan'ny hoe manana ny antony hamaritana ny vidin'ny fitaovana, fa manana fetra hafa koa isika toy ny:
El nitombo fahasarotana: ny fahasahiranan'ny fitrandrahana Bitcoins dia mitombo isam-bolana, noho izany dia ilaina hatrany ny fananana fahefana computing bebe kokoa hahafahana mitrandraka Bitcoins amin'ny tombony.
El vidin'ny angovo: ny vola madinika amin'ny fitrandrahana dia dingana mandany herinaratra betsaka, noho izany dia ahazoana tombony bebe kokoa amin'ireo firenena manana herinaratra ahazoana tombony bebe kokoa, toa an'i Shina, Islandy, sns.
La mari-pana momba ny tontolo iainana: ny processeur dia mamoaka hafanana be dia be mandritra ny fitrandrahana ary mila manaparitaka izany hafanana izany isika; noho izany ny fitrandrahana any amin'ny firenena manana toetr'andro mangatsiaka dia mampihena ny fandaniana ihany koa.
Noho ireo antony ireo - sy ny hafa - ankehitriny, ny ankamaroan'ny fitrandrahana vola crypto dia tanterahina any amin'ireo firenena toa an'i Shina, Islandy, Failandy, sns.
Araka ny efa nolazainay, Tsy mahasoa ny fitrandrahana vola crypto mivantana avy any an-trano izao dia izao. Raha ny marina, mety hahasoa izany raha mbola mitady ireo vola crypto vao noforonina vao tsy fantatra loatra isika ary mbola mamela ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany matanjaka kely, saingy raharaha iray hafa no homeko ho an'ny lahatsoratra iray hafa tena midadasika. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny fitrandrahana ireo cryptos lehibe isika ary tsy azo atao izao avy any an-trano izao.
Ka tsy afaka mahazo Bitcoin fitrandrahana vola intsony aho? Eny ny valiny dia eny, misaotra ilay fantatra amin'ny anarana hoe fitrandrahana rahona o cloud mining. Ny hevitra dia ny fisian'ireo orinasa vao tsy ela akory izay nametraka rafi-pitrandrahana vola madinika goavambe any amin'ireo firenena sy manana fitaovana manokana, lasa mahazo tombony, ary ireo orinasa ireo dia manolotra anao ny fotoana hanakaramana ny tolotr'izy ireo hanana ny toeram-pitrandrahana anao lavitra. Amin'izany no ahafahanao manana ny rafitra fitrandrahana Bitcoins ary tsy handoa sarany fotsiny ianao, hisorohana ny fitantanana mivantana ireo fitaovana.
Amin'izao fotoana izao dia misy orinasa maromaro manolotra ireo serivisy ireo saingy mila mitandrina ianao rehefa misafidy iray satria misy tranga sasany momba ny orinasa izay hosoka fa ny fikafika piramida dia nanambola vola tamin'ny mpanjifany. Izahay Manoro hevitra an'i Hashflare izahay, izay orinasa efa niasa tsara nandritra ny taona vitsivitsy manaporofo fa orinasa anisany io azonao atokisana ary inona ny tombony ambony amin'ny fitrandrahana rahona Avy amin'ny tsena.
HashFlare, bitcoins ahy ao anaty rahona
HashFlare Is a rafitra fitrandrahana rahona manolotra rafi-pitrandrahana misy fitaovana napetraka any Islandy, ahazoana tombony be noho ny vidin'ny angovo ambany any Islandy sy ny toetrandro mangatsiaka ahafahan'izy ireo mitahiry vola be rehefa manaparitaka ny hafanana amin'ireo fitaovana fitrandrahana. Avelan'izy ireo hitrandraka Bitcoins, Ethereum, Litecoins ary Dash amin'izao fotoana izao.
Te hitrandraka Bitcoins ve ianao?
Tsindrio ETO hitrandrahana Bitcoins
Ahoana ny fomba hitrandrahana vola crypto amin'ny Hashflare?
Na dia mety ho sarotra aza izany, vola madinika mitrandraka miaraka amin'i Hashflare dia tsotra be. Mila manaraka ireto dingana manaraka fotsiny ianao:
1.- Tsindrio eto ary misoratra anarana ao amin'ny HashFlare
2.- Raha vao ao anaty ianao dia mila mividy ny rafitra mpitrandraka. Eto ianao dia manana algorithma maro samihafa hitrandrahana cryptocurrency iray na hafa. Ny sasany mahazo tombony bebe kokoa noho ny sasany, fa izahay kosa miangavy anao izahay mividy ny algorithm SHA-256 ary ny Bitcoins an'ny ahy.
3.- Safidio ny habetsany inona no tianao hampiasa vola amin'ny dolara. Afaka mitrandraka amin'ny $ 1,5 ka hatramin'ny $ 15.000 ianao. Eto dia miankina amin'ny loharanom-pahalalana ho an'ny tsirairay sy ny vola tadiavinao hampiasa vola amin'ny fitrandrahana.
4.- Manaova fanonerana. Afaka mandoa vola amin'ny Bitcoins ianao fa raha mpampiasa tsy mandroso amin'ny fividianana crypto dia azonao atao koa ny manao azy mivantana amin'ny fomba nentim-paharazana kokoa toy ny banky na carte de crédit. Raha mampiasa carte de crédit ianao dia tsy maintsy manamarina ny fandoavam-bola ianao amin'ny manaraka amin'ny alàlan'ny fanondroana kaody izay tafiditra ao anaty sarany aminao ao anaty karatra, ka mety haharitra andro vitsivitsy izany.
Ary dia izay, azonao atao ny manomboka mitrandraka Bitcoins ary mahazo vola isam-bolana tsy mila manao zavatra hafa.
Ao amin'ny tontonana HashFlare anao dia misy fampahalalana azonao jerena ny vola miditra isan'andro, ny tombana amin'ny vola miditra mandritra ny 1 andro, 1 herinandro, 1 volana, 6 volana ary 1 taona hahafahanao mahita ny tombony azo avy amin'ny fampiasam-bolanao.
Raha vantany vao nanangona Bitcoin ianao dia afaka:
Mametraha vola ho azy hoy i bitcoins tamin'ny fividianana herinaratra fitrandrahana bebe kokoa ao Hashflare ka mitombo hatrany ny fitomboan'ny fampiasam-bolanao.
Ampidiro ao amin'ny poketranao ireto Bitcoins ireto izay ahafahanao mitahiry azy ireo na avadiho ho euro na dolara izy ireo ary avy eo ento any amin'ny bankinao izy ireo.
Araka ny hitanao, ny fitrandrahana vola crypto avy amin'ny rahona dia dingana iray mahitsy. Misaotra an'ireo sehatra toa an'i Hashflare afaka mampiasa vola amin'ny $ 1,5 ianao ary manomboka mitrandraka nefa tsy mila maka olana sarotra toy ny fividianana fitaovana manokana, fametrahana ny rafitra, fametrahana ny algorithm fitrandrahana, ... izany rehetra izany dia ataon'ny hashflare ho anao. Mila manapa-kevitra fotsiny ianao hoe ohatrinona no hatokananao amin'ny fampiasam-bola, mividy ny fahefa-mitrandraka ary dia izay. HashFlare dia miandraikitra ny fanaovana ny tombom-barotrao tsara indrindra, hanomboka hiara-hiasa amin'izy ireo dia tadidio izany mila tsindrio fotsiny eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Fitrandrahana Cryptocurrency, tadiavo ny fomba fanaovana harena an-kibon'ny tany amin'ny rahona
Jose Luis Ureña Alexiades dia hoy izy:
Lahatsoratra tsy dia tompon'andraikitra loatra. Tombantombana tsy mamokatra, ary etsy ambony miaraka amin'ny kryptocurrency manjavozavo ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana. Mety kokoa amin'ny Mafia noho ny olona tompon'andraikitra.
Valiny tamin'i Jose Luis Ureña Alexiades
Vaovao momba ny gadget dia hoy izy:
Salama Jose Luis Ureña Alexiades. Miala tsiny aho fa tsy tianao ilay lahatsoratra, marina fa fampidiram-bola mampidi-doza ny cryptokrasia ary izany no tsy maintsy andraisana azy ireo (amin'ny fitrandrahana dia somary ambany kokoa ny risika satria mazava ho azy fa misy koa io). Mazava ho azy, tsy mino izahay fa tsena ho an'ny mafia izany; Mety misy ny bandy jiolahim-boto tafiditra amin'ity sehatra ity noho ny tombony tsy fantatra anarana arosony nefa misy ihany koa sehatra iray manerana ny tontolon'ny sakana izay misy olona tena mahazatra. Blockchain dia hanao dingana iray manomboka amin'ny "Internet of information" mankany amin'ny "internet of value" ary raha voamarina ny mety hitranga dia mety hiatrika fiovana izay mitovy amin'ny revolisionera tahaka ny fahatongavan'ny midika izany ny Internet. Miarahaba sy misaotra anao namaky anay
Valiny amin'ny News Gadget
TAOM- dia hoy izy:
Mitovy ny fiheveran'ny governemanta sy ny banky, matetika ny hetra sy ny kaomisiona ary eo izy ireo amin'ny fifanakalozana eo anelanelan'ny Banky sy Governemanta ao ambadiky ny mpanjifan'ny banky izay tsy mahalala na manana fanazavana ny antony itanganany ireo kaomisiona be dia be amin'ny famindrana vola. Cryptocurrency dia fomba hafa ary azo iainana ary tsy afa-miala amin'izany izao tontolo izao.
Mamaly an'i Añ
Omar valfre dia hoy izy:
Mila mamaky bebe kokoa i José
Valiny tamin'i Omar Valfre
Oscar Lopez dia hoy izy:
Ka ireto orinasa ireto, fa tsy mitrandraka ny tenany sy manankarena, dia mivarotra anao mitrandraka mba hanan-karena? Mazava ho azy, mazava ho azy. Io dia toy ireo izay mivarotra anao taranja / boky ka hanan-karena amin'ny famatsiam-bola XD
Valiny tamin'i Oscar López
Eny, raha ny marina dia mitrana ampondra iray volana koa izy ireo. Ny zava-mitranga dia ankoatry ny fitrandrahana dia manolotra anao hanofa ny fitaovany izy ireo hahafahanao mitrandraka.
Hitako ho toy ny fomba iray hanamorana ny fidiram-bolan'izy ireo, ny% amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ary ny% hafa ho an'ny fanofana fitaovana.
Manana fisalasalana kely aho momba ny sehatra izay tsy nazava tamiko tao amin'ilay lahatsoratra. Azonao valiana ve aho? Misaotra anao:
1.- Ny herinao manofa, ohatrinona no vokariny? Azonao fantarina ve alohan'ny ividiananao azy?
2.- Ilaina ve ny manana kitapom-bola an-tserasera na an-tserasera hahafahana manaisotra ny bitcoins-nao?
3.- Inona no soso-kevitra bebe kokoa, ny iray ivelan'ny Internet na iray amin'ny Internet?
Misaotra sy arahaba, Antonio
1.- Ao amin'ny tontonana Hashflare mihitsy dia ahafahanao maka tahaka izay vokarinao isan'andro amin'ny hery nifanekena tsirairay.
2.- Eny, mila manana poketra bitcoin ianao hisintonana izay novokarina. Raha mitrandraka an'i Etera ianao dia mila kitapom-batsy Etera.
3.- Amin'ny sehatra fiarovana, azo antoka kokoa ny ivelan'ny Internet fa sarotra kokoa ihany koa ny fitantanana. Amin'ny farany, manapa-kevitra ny iray na ny iray miankina amin'ny fampiasam-bolanao aho. Raha hanao fampiasam-bola ambany ianao dia heveriko fa tsy mendrika izany ny ara-batana, raha toa ianao ka hampiasa vola be dia eny.
Misaotra anao mamaly ahy Miguel.
Jose Gonzalez dia hoy izy:
Salama, vao avy namaky ny lahatsoratrao momba ny fitrandrahana cryptocurrency ao anaty rahona sy HashFlare aho ary mividy ny algorithm SHA-256 sy ny Bitcoins ahy mandra-pahazoako mazava tsara ny zavatra tsy azoko mazava dia ny $ 1,50 izay no ananako izay mandoa isan'andro na isan-taona raha Ataoko fifanarahana izany. Misaotra betsaka anao jose
Valiny tamin'i Jose Gonzalez
Vanilla dia hoy izy:
Valiny tamin'i Vanila
Ny tavy sy ny taolana dia hitombo haingana kokoa noho io fitsaboana vaovao io